‘कमर्सियल कवि’काे चितवनमा कविता कन्सर्ट
१८ साउन २०७५, शुक्रबार
काठमाडाैं/ आजभोलि कविताको क्रेज बढ्दो छ । कविताको क्रेज बढ्नुको एउटा कारण कवि नवराज पराजुली पनि हुन् । उनी ‘एकल कविता’ वा ‘कविता कन्सर्ट’मार्फत कविता सुनाउन भनेर देश–विदेश हिँडिरहन्छन् । उनलाई सुनेर आनन्द लिने जमात पनि बढिरहेको छ ।
त्यसो त उनलाई ‘कमर्सियल कवि’का रुपमा विभिन्न संस्थाहरुले कविता सुन्नकै लागि नगद रकम तिरेर निम्त्याउन थालेको धेरै भएको छैन । तर, नवराजका कविता सुन्ने पारखी भने ह्वात्तै बढेको उनले देश–विदेशमा गर्ने कविता वाचनका कार्यक्रमबाटै थाहा लाग्छ ।
प्रविधिको बढ्दो उपयोगसँगै उनलाई प्रत्यक्ष सुन्न चाहने तर सुन्न नपाउनेहरुले युट्युबबाट सुन्छन् । सोहीलाई पुष्टि गर्छन् यी दुई कविता– ‘सगरमाथाको गहिराई’ र हेबी बड्डे’ले । जाे, युट्युबमा सर्वाधिक हेरिएकामध्यका दुर्इ हुन् ।
कविताकै सिलसिलामा नवराज बिहीबार भरतपुर पुगे । चितवनका विद्यार्थीबीच एक घण्टा उभिएर उनले कविताहरु सुनाए । उनका कवितामा संवेदना, उत्प्रेरणा, आत्मीयता, बाल्यकालका छुटेका स्मृतिहरु थिए । जो सुनेर श्रोता/दर्शक भावुक पनि बने ।
कार्यक्रमको सुरुवातमा उनले वामपन्थी लभ शिर्षकको कविता सुनाए । माहोल चुपचाप उनको कविता सुनेर आनन्द लिएको थियो । कविता सुनाउँदै गर्दा उनी कवितामा अभिनय पनि गर्थे । दर्शकहरु बेलाबेलामा ताली पिटेर उनलाई समर्थन गर्थे । त्यसपछि उनले च्याउ र मैझारो गरी अरु दुई कविता पनि सुनाए ।
आरम्भ फाउन्डेसन चितवन च्याप्टरले युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रमको आयोजना गरेका हो । कवि पराजुलीसँगै युवा उत्प्रेरक सौनक भट्ट, डा. होमबहादुर बस्नेत र फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले युवालाई उत्प्रेरणा दिने खालका प्रसङ्गहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
हाँस्नु त खुसी हुनुको उपकरण मात्रै हो
तीर्थ श्रेष्ठकाे कविता: सानो हुनुको अर्थमा
स्टिभ जब्सको छोरीको गुनासो : बाबाले कुनै सहयोग गर्नुभएन